ESI EWEPỤ KỌMPUTA NA PASWỌỌDỤ - WINDOWS - 2019
Anyị na-ewepụ paswọọdụ site na komputa
N'oge na-adịghị anya, ọ na-esiri ike igwu egwuregwu ndị ejiri chekwaa. Ndị a na-abụkarị ndị a zụrụ azụ na ikikere nke chọrọ ka diski na-abanye na ntinye aka. Ma n'isiokwu a anyị ga-edozi nsogbu a site na iji usoro UltraISO.
UltraISO bụ usoro maka ịmepụta, ọkụ na ọrụ ndị ọzọ na ihe oyiyi disk. Na ya, ị nwere ike ịghọgbu usoro ahụ site n'ịkpọ egwuregwu n'enweghị diski nke chọrọ ka diski dịnye. O siri ike ịgbanwuo, ọ bụrụ na ị maara ihe ị ga-eme.
Ịwụnye egwuregwu na UltraISO
Ịmepụta ihe oyiyi nke egwuregwu ahụ
Mbụ ịkwesịrị itinye fanye na egwuregwu nwere ikikere n'ime disk diski. Mgbe nke ahụ mechara, meghee ihe omume ahụ na nnọchite onye nchịkwa ma pịa "Mepụta CD Image".
Mgbe nke ahụ gasịrị, kọwaa ụgbọala na ụzọ ịchọrọ ịchekwa onyinyo ahụ. Ọkpụkpọ a ga-abụ. .Iso, ma ọ bụghị ihe omume ahụ agaghị enwe ike ịmata ya.
Ugbu a, anyị na-eche ruo mgbe e kere onyinyo ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, mechie windo UltraISO na-adịghị mkpa ma pịa "Mepee".
Kọwaa ụzọ ebe ị zọpụtara ihe oyiyi nke egwuregwu ma mepee ya.
Ọzọ, pịa bọtịnụ "Ugwu" Otú ọ dị, ọ bụrụ na i mepụtaghị bọtịnụ kwadoro, mgbe ahụ, i kwesịrị ịmepụta ya, dịka edere ya n'isiokwu a, ma ọ bụrụ na njehie nke ndị a na-achọtaghi na kọmputa ga-agbapụta.
Ugbu a, pịa "Ugwu" ma chere ka usoro ihe omume ahụ rụọ ọrụ a.
Ugbu a, i nwere ike mechie usoro ihe omume a, gaa na ugbua ebe i tinyere egwuregwu.
Anyị na-achọta ngwa "setup.exe". Mepee ya ma mee ihe niile ị ga - eme na ntinye nke egwuregwu ahụ.
Nke ahụ niile bụ! Ya mere, n'ụzọ dị mma, anyị jisiri ike chọpụta otú ị ga-esi wụnye egwuregwu echedoro na kọmputa ma kpọọ ya n'enweghị diski. Ugbu a, egwuregwu ahụ ga-eleba anya na windo a kwadoro dịka ụzọ nlele, ma ị nwere ike igwu egwu n'enweghị nsogbu ọ bụla.